Vaovao - Inona no tokony hojerena eo amin’ny fampiasana sy fikojakojana ny tanimbary?
Ny mpamboly vary dia milina fambolen-kazo mamindra ny zana-bary eny amin’ny tanimbary. Ny asany dia ny manatsara ny fahombiazan'ny asa sy ny kalitaon'ny famafazana zana-bary, ny fambolen-kazo akaiky, ary ny fanamorana ny mekanika amin'ny asa fanaraha-maso.
Alohan'ny fandidiana, mba hijery ny maotera, transplanter mekanika miasa, mandeha sy ny fanaraha-maso mekanika. Hamarino ny tena votoatin'ny maotera dia ny habetsahan'ny solika, menaka, ny fifandraisana amin'ny faritra fastening ny toe-javatra, sns .; Hamarino ny votoatin'ny mekanika miasa amin'ny transplanter dia ny fitafy, ny deformation, ny fanosotra ary ny haben'ny elanelana amin'ny mekanika famahanana transplanter, ny crank, ny swing rod, ny claw, ny garpu fambolena sy ny sisa; Hamarino ny tena votoatin'ny mandeha sy miasa mekanika dia clutch, mitondra fiara, familiana clutch fepetra miasa, ny habetsaky ny menaka ao amin'ny gearbox, ny henjana ny V-fehin-kibo, ny habetsahan'ny menaka ao amin'ny fiara sprocket boaty, ny karazana tariby fanaraha-maso.
Amin'ny fampandehanana ny motera, ny mekanika asa famindrana, ny mekanika mandeha ary ny fanitsiana mekanika fanaraha-maso. Ny votoatin'ny fanitsiana maotera dia ny fanitsiana ny fivoahan'ny tsimokaretina sy ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny carburetor. Ny votoatin'ny fanitsiana mekanika miasa amin'ny transplanter dia ny elanelan'ny zavamaniry, ny laharan'ny zavamaniry, ny halalin'ny famafazana, ny elanelana misy eo amin'ny fanjaitra sy ny fork transplanter, sns. Ny votoatin'ny fanitsiana ny mekanika mandeha sy miasa dia: ny fanitsiana ny tariby. ny clutch lever tariby, fiarovana tariby, hydraulic fanandratana tariby tahony, familiana clutch tariby sy ny fanadiovana sy ny fahatsapana ny fanitsiana. Raha lehibe loatra na tsy misy dikany ny fivoahana, dia tokony ahitsy ny nut adjustment. Amin'izay fotoana izay ihany koa, atsipazo menaka vitsivitsy ao anaty lavaka misy ny tariby mba hampihenana ny fikorontanan'ny tariby ary hampitombo ny fahatsapana.
Raha miasa mandritra ny 100 ora mahery ny mpanodina, dia ilaina ny manao fikojakojana tsy tapaka ny mpanodina; Ny fikojakojana mandritra ny vanim-potoana idle dia antsoina koa hoe aorian'ny fikojakojana ny vanim-potoana. Ny mpamboly vary amin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny asa dia matetika tsy miasa mandritra ny volana vitsivitsy na mihoatra ny antsasaky ny taona, noho izany dia manaova asa tsara amin'ny fikojakojana aorian'ny vanim-potoana, mba hanitarana ny fiainan'ny mpamboly vary dia tena zava-dehibe.
Raha tafahitsoka ao amin'ny tanimbary ny mpanondrana, dia tokony hafatotra amin'ny tadin-tady eo anoloan'ny fuselage ny tady mba hisintonana azy. Tandremo tsara ny tsy hamatotra ny tady mihoatra ny tady fisintonana ny transplanter, raha tsy izany dia hiteraka deformation ny milina sy ny fahasimbana ny milina. Amin'izay fotoana izay ihany koa, esory ny zana-kazo rehetra napetraka eo amin'ny lampihazo mitondra zana-kazo, ny lampihazo mitondra ny zana-ketsa fanomanana, ny sehatry ny milina sy ny entana tsy ilaina, ary avy eo ny traction.